Ubuntu: Uche m banyere nkesa a | Site na Linux
Ubuntu Obi abụọ adịghị ya na nkesa na-akpata arụmụka kachasị n'etiti ndị ọrụ nke GNU / Linux. Fọdụ na-asọpụrụ ya, ndị ọzọ kpọrọ ya asị .. Ihe kpatara ya? Lee ụfọdụ ihe atụ:
Ubuntu erite uru site na ọrụ mepụtara site na otu nke Debian ọ dịghịkwa akwụghachi ụgwọ maka mgbalị ahụ.
Ubuntu tinye ngwugwu nke akwadoro nani na distro a ma obughi na nne na nna (Asụsụ Debian).
Ubuntu nwere n’azụ ụlọ ọrụ na otu nwoke (Shuttleworth) na ebumnuche iji nweta uru na nke kachasị.
Ubuntu ọ nweghị echiche nke ndị ọrụ ya ma na-eweta mgbanwe ya dịka a ga - asị na ọ bụ Windows ma ọ bụ OS X.
Ubuntu Ọ bụ ejighị n'aka, ha na-echegbu onwe ha maka ịmalite ya kwa ọnwa isii ma ngwugwu ha na-arụ ọrụ ma ọ bụ na ọ bụghị.
Ubuntu Detuo na oS X.
Agbanyeghị, ndị a bụ ụfọdụ n'ime arụmụka m na-abịa kwa ụbọchị na nke, ọ na-eme Ubuntu bụ nkesa a na-asị n'ime Community nke GNU / Linux.
Ọ bụrụ na m ga-eme ihe n'eziokwu, ekwenyeghị m ụfọdụ n'ime ha, ọ bụ ezie na nke ahụ dabere n'echiche nke ị si lee ya. Anaghị m ekwu na ntinye na nkwụghachi ụgwọ nke Ubuntu n'ebe Debian enweghị isi, mana ọ bụ eziokwu na ha nwere ike inye karịa karịa ihe ha na-enye ugbu a. Ma ọ bụrụ na ha emee, anụbeghị m.
Eziokwu ahụ bụ na ha na-agbakwunye nchịkọta naanị maka nkesa a (Unitydị n'otu dịka ọmụmaatụ), ma ọ bụ ọbụna, na ha nwere PPA nke ha nakwa na ụfọdụ anaghị arụ ọrụ Debian, ọ dịghị eme ka ha dị njọ ma ọ bụ ka mma karịa onye ọ bụla ọzọ. Eeh Debian (ma obu nkesa ozo) o dakọghị n'ụfọdụ ngwugwu ma ọ bụ ihe ndị ịdabere na ha, ọ bụ naanị n'ihi na ha achọghị.
N'ihi gịnị? Ọ dị mma, n'ihi na n'ozuzu, ngwugwu ọ bụla dị na nchekwa nwere koodu mmalite ya, yana nke a, o zuola maka nkesa ndị ọzọ ịnakwere ụfọdụ ngwa ndị na-egosi naanị Ubuntu.
M na-ajụ onwe m otu ajụjụ ahụ, kedu ihe ọ bụ Mark Shuttleworth chọrọ iji naghachi Ubuntu y CanonicalEgo ole ka itinye ego site n'akpa gị iji mepụta nkesa na ụlọ ọrụ n'otu n'otu? N’eziokwu, ahụtụbeghị ihe ọ bụla m mere Mark Shuttleworth o Ubuntu nke gafere oke nke ụkpụrụ omume ma ọ bụ mebie nnwere onwe 4 nke Open Source.
Na Obodo nke Ubuntu Ọ bụghị ya ka a kacha ege ntị na ọ bụ eziokwu, mana ị ga-eji enweghị mmasị wee were akụkụ abụọ ọ nwere ike ime ihe na-atọ ọtụtụ nde ndị ọrụ gburugburu ụwa ụtọ? Echeghị m na ọ ga-ekwe omume.
Ọ bụrụ na m na-eche Ubuntu kwesiri inwe ntaneti oghaghariri, ma obu opekata mpe ihe yiri nke inwere Debian. Softwarezụlite ngwanrọ, na-eme ka ọrụ ya dị ọcha, na-agbazi njehie ya ma hapụ ya 100% arụ ọrụ kwa ọnwa isii yana megide elekere, echeghị m na ọ bụ ezigbo omume. Nke a na-eme Ubuntu O nwere ike ịbụ ejighị n'aka, ọ bụ ezie ee, ọ dịkarịa ala nye m n'oge m jiri ya, ọ nweghị mgbe m nyere m nnukwu mmehie iji lie ya na eriri afọ m siri ike.
Ihe Ubuntu Detuo na OS X? Ezi, ọtụtụ nkọwa dị na imewe nke Ịdị n'Otu Ha bụ ezigbo oyiri nke oS X, ọbụna site n'aka onye bu ya ụzọ Nzọụkwụ Ma nke ahụ? Kedu ihe bụ nsogbu? Kama nke ahụ, ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ oS X ma ha enweghị ike ịzụta ya, ha nwere ike nwee ahụ iru ala inwe ihe yiri ya na n'efu, ma ọ bụ ọ nwere ike ịme mgbanwe ahụ Linux nke ndị ọrụ nke oS X.
Ọ dị njọ ma ọ bụ dị mma, Ubuntu akara a tupu na mgbe na akụkọ ihe mere eme nke GNU / Linux. Ma ha masịrị ya ma ọ bụ na ọ masịghị ha, anyị ga-anakwere na ekele maka ahịa ya, yana nkà ihe ọmụma niile dị n'ichepụta nkesa dị mfe ma dị mfe iji, ọtụtụ puku ndị ọrụ bịarutere na nke mbụ GNU / Linux, ọ bụ ezie na mgbe e mesịrị ha na-agba ọsọ ịgbaba na nkesa ndị ọzọ.
Anaghị m eji Ubuntu ma ọ bụ ihe nkwekọrịta ya naanị n'ihi na ọ dị m mma Debian, ma abụ m otu n'ime ndị na-eche na, dị ka Fedora, openSUSE, Archlinux…, Ọ bụ oke nkesa.
Ihe m ekwenyeghi na mkpebi ụfọdụ ndị mmepe ha mere? Kedu ihe m chere Ịdị n'Otu Nke a ọ bụghị nke kachasị mma ebe ahụ? Ọ bụ eziokwu, mana ọ nweghị ihe dị n’ime ụwa Isi Iyi nke na-enweghị ihe ngwọta ma ọ bụ ọzọ.
Agbanyeghị, ọ dị ntakịrị ntakịrị ihe maka mmalite nke Ubuntu 12.10 Ma oburu na ibu otu n’ime ndi oru ahu choro nkesa enyi, ana m akwado ka ile anya. Na-echeta mgbe niile na ị nwere ụzọ ọzọ: Linux Mint, SolusOS, PCLinuxOS, Debian, emegheSUSE… Wdg.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Ubuntu: Uche m gbasara nkesa a
Ihe 81 kwuru, hapụ nke gị
Abụ m onye Debianite ịnwụ, mana anyị ga-amata na Ubuntu bụ sistemu zuru oke maka ndị chọrọ ịmata ihe bụ ndị etinyere na Windows ụwa. Dị ka Stallman si kwuo, Ubuntu abụghị ihe mgbaru ọsọ, ọ bụ naanị nnukwu nzọụkwụ na ụzọ ziri ezi.
Ọ bụchaghị. Ubuntu taa bu otu n'ime otutu nhọrọ ndi oru a, o gha adighi nma ikwu na obu uzo zuru oke.
Ndị ọrụ Windows chọrọ ịgbanye na ngwanrọ n'efu na-achọkarị ihe dị ka Windows na anya nke mere na ọ maara ha, mana na-enweghị nchekasị banyere njehie dị n'ime na malware.
Na mkpokọta, KDE na-egbu ọtụtụ ndị mmadụ na mbụ n'ihi na ọ dị ka Windows 7 karịa gburugburu ndị ọzọ, yana n'ezie, ndị ọrụ ahụ amaghị ihe eserese eserese, ha na-eche na ihe ha hụrụ na ya desktọọpụ sistemụ n'onwe ya.
Ekwenyere m na okwu gị, m na-etinye ndị enyi m niile Ubuntu ma ana m enweta onye ọ bụla iji ya dị ka isi OS, ọ na-arụ ọrụ oge mbụ ma ọ dịrị m mfe inye ndụmọdụ na ndozi. N'okwu m, abụ m onye ọrụ kwesịrị ntụkwasị obi nke ọrụ chakra. ^ ___ ^
Dị nnọọ ikwenye na post!
M na-eji anddị n’otu ma na m na-amasị ya. Agbalịrị m gburugburu ebe ndị ọzọ mana achọtara m ngwa ngwa a (ọ bụghị ìhè) ma rụọ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụhaala na ị nwere ike iwunye Ubuntu gburugburu ebe ndị ọzọ, ọ dị njọ ka ha setịpụ otu na ndabara, agaghị m akatọ ha ma ọ bụrụ na ha ahọrọ ya.
Ndewo, abụrụla m onye ọrụ Ubuntu ruo afọ ole na ole ruo ọnwa ole na ole gara aga m gbagara Linux Mint Debian Edition (LMDE) na Debian, ka m chee na m ga-anọ na ya ruo mgbe ebighị ebi.
Enwere ihe ole na ole ekwenyeghị m na gị. Nke mbu, ichoro idetu OS X ma obu Windows abughi ihe ojoo, Ọzọkwa, Ubuntu nyeere aka ikwuputa Linux karia otutu nkesa ndi ozo tinyere nkesa nne, Debian. Anyị nwere ike ịmasị ya karịa ma ọ bụ obere, mana ka anyị mee ihe n'eziokwu, anyị nwere mmasị na LInux ejiri ya ma nwekwuo nkwado na ọkwa onye ọrụ.
Nke abụọ, na Cannonical bụ ụlọ ọrụ na ihe ọ chọrọ bụ uru, ọ bụghị ihe ọjọọ, na ntụle, n'ihi na ọ ga-eweta uru ma ọ bụrụ na ọ jisie ike ịmasị ndị ọrụ na ndị ọzọ. Ọ bụ eziokwu, na nke a adabaghị na obere nụ Ubuntu obodo, enwere m olile anya na nke a ga-emezi ya, n'ihi na echere m na ọ bụghị ụzọ ziri ezi.
Maka ndị ọzọ, ọ bụ eziokwu na ọbụlagodi na iji Unity eme ihe, enweghị m mmasị na ya, kedụ ihe ọzọ, ugbu a, m na gnome3 na gnome-shell ya ma ọ masịrị m karịa Unity, n'agbanyeghị na ha abụghị otu.
Ekele ma ewezuga isi abụọ a, eziokwu bụ na Ubuntu nwere uru na ọghọm ya nke anyị na-ekwenye.
Ọfọn, ọ dị m ka m aghọtaghị onwe m nke ọma n'isiokwu ahụ, n'ihi na ọ dịbeghị oge m kwuru na m na-eche na ọ dị njọ na Ubuntu mbipụta OS X yana Canonical nwere uru, ma ọ bụ ọ bụrụ?
Echere m na Israelem agụghị isiokwu niile mana ọ bụ naanị isi ihe ị kwuru na mbido. O mekwara mkpebi site na nke ahụ naanị. A na m akpọku gị ka ị gụọ ya nke ọma ka ị wee hụ na esemokwu gị enweghị isi.
Ihe ị na-ekwu bụ otu ihe ahụ dị n’elu.
Enwere ọtụtụ isi na-adọta uche.
Point # 3: Canonical bụ ụlọ ọrụ yana dịka ụlọ ọrụ ọ ga-agbadokwa n'ụzọ, enwere ihe na-ezighi ezi?
Isi # 4 M ga-eche banyere ya. Dịka ụlọ ọrụ, ha ga-enwe ụdị ndị isi oche na ọrụ maka ịme mkpebi, echere m na ha kwesịrị ịmatakwu ụfọdụ aro na kedu ka ị si mara na Apple na Win amaghị ihe ndị ọrụ ha chere ? Have nwere kọntaktị?
Point 5 # Onweghi ihe ikwu. 100% kwenyere.
Oge ikpeazu .Ubuntu = Winbuntu. Kọwaa ya nke ọma biko.
Nke mbu, echiche ndi a abughi nke m, kama obu nke m na-anu kwa ubochi, nke na-eduga n'inye gi ajuju ajuju ndi a:
- Amaghị m, ma ọ bụ na anaghị m eche ma Apple ma ọ bụ Microsoft na-ege ndị ọrụ ha ntị, enweghịkwa m ịkpọtụrụ ha.
- Ubuntu = Winbuntu bu ihe otutu ndi oru kwuru, ya bu, Ubuntu bu OpenSource Windows, maka ufodu ihe ndia edeputara n’elu.
Ee, Echere m na Ọdịdị nke post bụghị ihe kasị kwesị ekwesị. O doro anya na ndị mmadụ na-agụ isi ihe ma chee na nke ahụ bụ echiche gị banyere ya, ha na-awụlikwa elu ịza ajụjụ n'agụghị isiokwu ndị ọzọ.
Ọ bụ eziokwu na anyị nwere ike ma ọ bụ obere kwere na mkpebi Canonical, mana ọ bụ eziokwu na ọtụtụ n'ime anyị banyere ụwa site na ya (ọ bụ distro mbụ m jiri mee ihe, tupu m gafee ọtụtụ mana ha emeghị ka m kwenye ma ọ bụ na enweghị m ike hazie ya)
Mmasị ... Abụ m otu n'ime ọtụtụ ndị malitere na GNU / Linux maka Ubuntu, n'ihi na n'ụlọ akwụkwọ m (n'akụkụ a na-amaghị ama nke Honduras) ihe dị iche na-eme, ha kwenyere na Ubuntu niile bụ Linux, ọ bụ maka ihe na-abụghị? (Ọ bụghị amaghị ihe ọ bụ, ọ bụ Microsphtonia) ... Maka m Ubuntu bụ nnukwu OS, ọ bụghị nke kachasị mma ma ọ bụ nke kachasị njọ, ma Shuttleworth ọ dị na ajị anụ opekata mpe ọ na-enye anyị ahụmịhe mara mma ...
Onwe ya, ọ na-eme m ihu ọma ịhụ ka Ubuntu m hụrụ n'anya ka a na-emeso dị ka a ga - asị na ọ bụ windo XD, mgbe ọ bụ onye gosipụtara m ụzọ Linux na nnwere onwe ahụ ... Ọ zuru oke maka onye ọrụ njedebe na-ege egwu ma na-ele ihe nkiri na-enweghị ịghọ geek ọkachamara, nri? ...
Amaghi m ubuntu, o diri ya na Linux Linux nke Elyssa 5, ebe m nwere ike ghara ibanye cd, mana aghaghi m ikweta na ewepu ubuntu agaghi enwe Linux ma ya mere agaghi m abanye Linux, ya mere Ubuntu adighi adi nsọ ntinye m ma ewezuga ya, agaghi enwe nnukwu nsogbu ahụ nke malitere m na ụbọchị m ka na-enweghị ike ịmalite ubuntu dvd yabụ m gbalịrị kubutu na lubuntu ọ dịkwa m mma mana m na-alaghachi na mint na ugbu a na m maara ihe Enwere m iche na Debian m hụrụ n'anya.
Eeh, e nwere m ọtụtụ nsogbu na nwụnye Ubuntu mana mana amaghị m ihe kpatara na anaghị m ahapụ ya ... Achọrọ m ịnwale ya, ọ dịka akụkọ ifo na GNU / Linux, inye ya aha nke siren na-eme ka ị jiri ya, nri? ... Daalụ Ubuntu!
Eji m Ubuntu mee ogologo oge wee gbanwee Debian maka nnwale kwụsie ike wee gaa n'ihu na Ubuntu dịka nkesa nke abụọ, mana mgbe Unity gasịrị, m chụpụrụ Ubuntu na pc m.
ubuntu bụ ihe ọ bụ, ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na ọ dịtụghị agbanwe agbanwe mana ya na LTS ọ na-aga nke ọma, ịdị n'otu dị mma wapo mana maka ndị na-enweghị mmasị na ya ị nwere ike itinye gnome kpochapụwo ma ọ bụ gnome shell na 12.04, ma ọ bụghị na enwere kubuntu ma ọ bụ lubuntu, ọbụna xubuntu, ha niile na-arụ ọrụ nke ukwuu, enwere m lubuntu na laptọọpụ ochie m ma eweghachite ya na ndụ mgbe windo gasịrị, m ghọtara na ọtụtụ ndị ahụghị Ubuntu n'anya, m ghọtara ihe kpatara ndị ọzọ ji hụ ya n'anya, mana nke bụ eziokwu bụ na Ubuntu Ọ bụ tupu na mgbe emepere emepe, ma ọ bụrụ na ịchọrọ imeri ụwa desktọọpụ nke ukwuu, ụzọ ahụ bụ nke akara site na ubuntu, maka ihe ọ bụla na windo.
Free Gaucho dijo
Otu anyị si ekwu n'ọhịa: "Ubuntu gbara akwụ mpi."
Zaghachi Gaucho Libre
Enwere m ntakịrị echiche banyere Linux ma echere m na Ubuntu emeela ka ihe dịrị ndị dị ka m mfe (nde). Ma ọ dịkarịa ala, ịmalite mmalite dị mma. Emechaa, ọ bụrụ na ndị mmadụ kwado onwe ha na sistemụ a, ha ga-anwalerịrị “ụtọ” ndị ọzọ.
N'oge ahụ Xubuntu m na-arụ ọrụ, ọ bụkwa Linux na-arụ ọrụ nke ọma maka ihe m chọrọ. Nke ahụ bụ ihe kacha mkpa.
Achọpụtara m na ọ dị mfe ma kensinammuo iji! 🙂 Nke ahụ ọ́ dịghị mkpa?
gbalịa openSUSE na Yast2 ma ọ bụ Mageia gị na Mageia Control Center.
Ubuntu enweghị ngwá ọrụ ruru otu n'ime ha abụọ.
Have nwere echiche ọ bụla na ego ole ọ furu m iji wụnye mmanya na emepe
zypper na mmanya ma ọ bụ zypper wụnye mmanya
Ọ bụrụ na ịchọrọ ụdị mmepe ahụ, tinye mmanya repo si yast2 (repositories obodo) wee gbanwee ebe nchekwa mmanya,
dị mfe dị ka nke ahụ.
Elav, Ubuntu bu otu n'ime azịza nye ajuju gi, nke bu: Gini bu uzo GNU / Linux iji rute onye oru a? Linux na-ekele Ubuntu, ya mere enwere m ekele ebighi ebi maka nkesa a. Ọrụ Ubuntu na-eme ka Linux nweta onye ọ bụla, na-enye ya nnukwu mkpa karịa Debian, Arch Linux ma ọ bụ Slackware, maka ebumnuche ọ ga-abụ, na na DistroWatch, Ubuntu na-anọkarị na ebe atọ mbụ, nke ahụ abụghị n'efu.
Amaghị m usoro ọ bụla nke ịwụnye na Linux nke karịrị apt-nweta wụnye xxxx na nke na-enwetakwa ntụkwasị obi ya niile bụ uche m yana na ejirila m distro dị iche iche si ubuntu tụgharịa na nsụgharị ya na suse ya na nkwekọrịta ya.
ma ọ bụ n'ebe ọ bụla dị mma
Abụ m onye ọrụ Ubuntu. Anọ m na-eji Ubuntu kemgbe 11.10/6 pụtara, nke pụtara na m dịtụ ọhụrụ na Linux ụwa. N’agbanyeghi nke a, etinyego m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n’oge m nwere ohere ịmụ akwụkwọ ndị ọzọ na - anwale ha. Ọ bụ eziokwu na ụfọdụ anaghị arụ ọrụ dịka ha kwesiri n'ụzọ ọ bụla mana emezuru m ebumnuche m bụ ịnwale ha ma hụ ihe masịrị m na nke ọ bụla. M hụrụ Ubuntu n'anya nke ukwuu. Ọ bụ ihe "enyi na enyi", ,dị n'otu na-eme ka ndụ gị dị mfe mgbe ị na-achọ faịlụ, mmemme, akwụkwọ, wdg, ha na-emekarị "mmelite" nke mmemme ahụ. Ọ bụ ya mere m ji dị iche na ụfọdụ isi mmalite ndị a kpọtụrụ aha na mbido. Ee, ọnwa isii ọ bụla Canonical na-emegide elekere iji wepụta ụdị ọhụrụ nke nkesa ya, Ubuntu. Nke a apụtaghị na mmemme na ngwa ndị adịlarịrị na-echekwa, kawanye mma, wdg. Ahụla m ya. Kwa izu enwere ọtụtụ mmelite nke ngwa m na-eji. Dị mfe dị ka ịtinye ebe nchekwa gị iji nweta mmelite gọọmentị. N'ụzọ doro anya, ha amaraworị nke ahụ.
Maka Shell, akpọrọ m GNOME Shell asị. GNOME Fallback ma ọ bụ Classic, nke a bụ nke m na-eji ma dezie ya n'agbanyeghị na m chọrọ. Maka na ọ dị ka OSX, enweghị ọtụtụ nkesa dị ka Windows? Enweghị m ike ịnagide Windows "anya", yana ọ bụ nkeonwe. M na-eji Windows arụ ọrụ mgbe niile mana ana m akpọ desktọọpụ asị.
Canonical… adịghị Redhat ime otu ihe ahụ? Uru si na nkwado ha. Obodo GNU / Linux, ọ bụrụ na ha ga-ekele maka ihe, ọ bụ maka ụlọ ọrụ dịka Redhat na Canonical ewerela ọrụ nke ịkwalite ọrụ ha / ngwaahịa ha nke ọma. A sị ka e kwuwe, ihe IT agaghị akwụ ụgwọ maka ọrụ ya, ọ bụ maka Linux OS, Windows, Mac, Unix, wdg. Onye na-arụ ọrụ aghaghị inwekwa ihe ọ ga-eri. Taa, ọ bụrụ na ndị ọrụ nke nkesa Linux ọ bụla kwesịrị ịdị mpako maka ihe ọ bụla, ọ bụ mmata zuru ụwa ọnụ nke ụlọ ọrụ ndị a nyere anyị na-agabeghị na mpụga echiche Open Source, dị ka onye edemede nke isiokwu a na-ekwu.
N'ikwu eziokwu, aghọtabeghị m esemokwu dị n'etiti ndị ọrụ nke nkesa dị iche iche, n'agbanyeghị ihe kpatara ya. Na ngwụcha nke ụzọ ahụ, anyị niile sitere n'otu obodo na njikọta nke obodo ahụ niile dị mma karịa ịbawanye iche. Ntughari aka bu ihe kwagidere uto nke nkesa di iche iche kemgbe otutu otutu afo. Anaghị m ekwu maka ịgbasawanye nke dị ka enwere ọtụtụ nkesa, nke ahụ bụ opekata mpe ya. Maka uto, agba. Ana m ekwu maka ịgbasawanye na "ị na-eji Ubuntu", "M na-eji Arch", "M kpọrọ asị Unity", "KDE ka mma" ma ọ bụ echiche ọ bụla i nwere. Nke ahụ bụ ihe m chere na ọ dị njọ n’obodo. Ọbụna iwu na nkesa ụfọdụ yiri nke a. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile yiri nke ahụ, ihe mgbanwe bụ ọdịdị na nkọwa ụfọdụ, dịka ndị ahụ ekwuru na Ubuntu na-ewepụta ụfọdụ ihe maka Ubuntu naanị. Agbanyeghị, enwere ụzọ iji wụnye ha na nkesa ndị ọzọ, dị ka onye edemede kwuru.
Nke a adịworị ka ọgbụgba ndụ.
O di nwute na mgbe ị na-ewekwu oge ị ga-ahụ na ọgba aghara dị n'etiti ndị ọrụ nke nkesa na ọrụ bụ nsogbu na-esighị ike karịa nke ahụ, na maka ọtụtụ ndị enweghị udo ọ bụla. N'ọnọdụ ọ bụla, ọtụtụ n'ime nkwenye na esemokwu nwere ezigbo ntọala siri ike ma sie ike idozi nke ọ na-adịghị mma ileghara anya. Naanị ihe m na-arịọ ndị mmadụ bụ na ha maara etu esi arụrịta ụka banyere esemokwu ha na enweghị oke mmụọ (agha dị nsọ) ebe ọ bụ na nke ahụ na-emebi ụwa nke ngwanrọ n'efu.
Aghọtara m ọtụtụ esemokwu, ọkachasị ma a bịa n'ihe gbasara sọftụwia na - akwụghị ụgwọ na ihe na - abụghị, na Ubuntu abụghị distro n'efu, wdg. Isi okwu m na-ekwu bụ na ụwa agbanweela na GNU / Linux obodo, kama ịrụ ụka banyere obere ihe, kwesịrị ịbịakọta makana iche, onweghị ihe a rụpụtara. Youhụbeghị ihe omimi ihe nkiri ebe onye ọ bụla na-ekpebi igbasa na onye ọ bụla mechara nwụọ? Nke ahụ bụ ihe m na-ekwu. Wa a nke sọftụwia na - akwụghị ụgwọ dị egwu karịa m nwere ike iche n’echiche, mana ihe niile, echere m na njikọta n’etiti mmadụ niile ga - akacha adaba. M na-ekwughachi, M na-apụtaghị iche dị iche iche na-adị, m na-ekwu obodo n'otu dị ka ndị dị otú ahụ. Echere m na ọgba aghara dị iche iche dị ezigbo mma na ụdị dị iche iche dị mma. Uche dịgasị iche iche nke ndị dị iche iche, echiche, dịkwa mma, n'ihi na, ị ga-eche ụwa ebe mmadụ niile na-eche otu ihe? Ọ ga-agwụ nnọọ ike. Mana n'ime esemokwu ndị nwere ike ịdị na echiche, ndị ọrụ nke nkesa GNU / Linux ọ bụla nwere ihe jikọrọ karịa esemokwu.
Nke ahụ bụ ihe m na-ekwu, n'ihi na oge ụfọdụ anyị ga-ahụ na ịchọrọ ịkpọkọta ụfọdụ ndị ọrụ dị ka ịbanye n'ime akpa nwamba, ma ọ bụ ka njọ, dị ka ịbanye ọdọ nke piranhas nke na-eribeghị otu ọnwa. Ọtụtụ n'ime anyị agbaala arụkwaghịm ma anyị na-arịọ ndị nke anyị ka ha see okwu dị iche na nke obere ịdị jụụ.
Ị nwetere ya. Mana m gaghị amalite ịchọ njikọ nke mmadụ, m ga-amalite na onwe m. Mụ onwe m kwenyere na enwere m esemokwu ndị m kwesịrị ileghara anya, echiche dị iche iche mana nke ahụ anaghị emetụta m. Mgbe ahụ, m ga-achọ ndị ọrụ yiri m. Onye obula achoghi isonye na obodo a ghota ya nke oma, ma obodo di otua kwesiri idi. O doro anya na enweghị m ike ịgbanwe ụwa ... enwere m ike?
Darko, m hụrụ echiche ahụ n'anya n'ezie, ọ dị oke mma. Mana ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anyị chọọ ndị ọrụ na-eche echiche yiri nke anyị, anyị na-etolite obodo dịka ị na-ekwu ma anyị na-enyere ndị mmadụ aka, mana na mberede anyị na-ahụ na ndị ọzọ mebekwara nke ha, ndị ka ọtụtụ, ndị na-ekwu na ha nwere eziokwu ahụ, na anyị anaghị enye aka na ihe ọ bụla ma ha bịara maka anyị ma ọ bụ na opekata mpe mgbe ọ bụla ha nwere ike ikwu okwu ọjọọ ha na-eme ya, ka anyị ghara ịgbachi nkịtị anyị na-aza ha site na ịtọlite ​​agha ọkụ ozugbo, yabụ ndị ọrụ ọhụụ batara ma hụ ọgbaghara ahụ e guzobela ma were onyogho jọgburu onwe ya nke Linux ụwa dum, ụfọdụ lara na ndị fọdụrụ, ọtụtụ sonyere n'agha nsọ na-adịghị agwụ agwụ. Nke ahụ bụ akụkọ ihe mere eme nke obodo anyị ga-ahụ mgbe niile. Naanị ihe fọdụrụnụ bụ ịme oriri ahụ n'udo.
Ị nwetara ya. Anyị ga-agaghachi na otu ihe ugboro ugboro. Ọfọn, dịka ha na-ekwu n'àgwàetiti PR m "M ka nọ na nke m." Ana m ele ebe niile, ebe m nwere ike nweta enyemaka na / ma ọ bụ azịza ma ọ bụrụ na m nwere ike inyere ndị chọrọ ya aka n'ihi na obere ihe ọmụma m nwere abụghị nke m. Ozokwa, nnwere onwe gbasara nke ahụ, inwe uche imeghe ohere ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ohere ndị ahụ abụghị ihe ị bu n'uche.
Site na Ubuntu amalitere m na Linux (dị ka ọtụtụ) Nke m nwere ekele n'ezie, enwere m CD ahụ na-adịghị mma (mgbe ha zigara ha n'efu: D) echetara m na okwu 7.10 bụ ihe m hụrụ n'anya, ruo taa ka m dị ezigbo mma Ọ dị mma na isiokwu mmadụ na akara ngosi oroma, ihe m na-achọghị n'ezoghị ọnụ bụ nsụgharị na-agba ume, (ọ bụghị naanị Ubuntu, mana ọtụtụ n'ime distros na izugbe.) Yabụ, ngwugwu ya na-enweghị nkwado maka nsụgharị ndị ọzọ. ugbu a ana m eji arch, mana aghaghi m ekele ubuntu maka iweta m nso na uwa ndi Linux.
Ubuntu bu nkesa di nma iji bido na Linux ma obu inwe sistemu eji aru oru ma di mfe iji, n’enyeghi ndu gi nsogbu. Amalitere m na Ubuntu n’afọ 2008 ma ịdị n’otu ya jisiri ike mee ka m tụọ ụjọ na Mint, Chakra, na Arch.
Ya mere ikwu okwu, Ubuntu bụ otu n’ime “ibo ụzọ” nke ụlọ, ọnụ ụzọ; Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-amasị ije, ị ga-achọ ịhụ okpuru ulo, elu ụlọ na inyocha ụlọ ọ bụla nke anụ ọhịa na inch. Mgbe oge ahụ ruru, ọ bụrụ na ọ bịarute, onye ọrụ ahụ na-awụli elu na ndị ọzọ ... ma ọ bụ chọọ onye ọnụ ụzọ ya dị iche. Mana, na nkenke, ọ ka bụ akụkụ nke nnukwu ụlọ penguuin na-ese.
Ubuntu di nkesa dika ihe ozo. Ọ dịghị ihe ọzọ na-erughị. Na mmejọ na ihe ịga nke ọma.
Ọ bụ ya mere na overvaluing ya bụ a ndudue.
Ọ bụ ya mere na-elelị ya bụkwa a ndudue.
Abụ m onye ọrụ Ubuntu n'agbanyeghị na m gbalịrị ma gaa n'ihu ịnwale nkesa ndị ọzọ. Enwere m ịhụnanya na Linux n'ozuzu. M hụrụ isiokwu gị n'anya. Echere m na ị lekwasịrị anya na iche. I kwuola ihe a na-ekwukarị banyere ya ma dee echiche gị. Maka m ịdị n'otu dị ezigbo mma mgbe iji ya. Enwere m obi ụtọ iji ya na nke mbụ ya na laptọọpụ nke na-enye m uru. Na pc ọ nwere ike iwe ogologo oge iji ya. Ọ bụghị naanị Ubuntu bụ nkesa na-abịa na ndabara desktọọpụ. Nkesa niile nwere ya ma ọ gbagwojuru anya ma ọlị iji gnome, dịka ọmụmaatụ, nke ochie na nke oge a ma negao kwuru maka ịgbakọ. N'aka nke ozo enwere kubutu, lubuntu, xubuntu wdg, wdg nke bu otu Ubuntu nwere desktọọpụ di iche. Echere m na nke ahụ na-eme ka ihe dịkwuo mfe. Na Ubuntu abughi otu na m chere na obughi nke kacha mma. Ndị ọrụ Linux kwesịrị, anyị niile ga-etinyekwa aka, kwụsị ịbụ "obere ụmụ nwoke" nke obodo wee pụọ n'igwe ojii. A novice Linux Linux na-atụkarị ụjọ ịjụ banyere ihe nzuzu ha na-azakarị ebe a na ihe ị na-ahụ ọtụtụ nke a kwa. M na-eji Ubuntu n'ihi na achọpụtara m na ọ mara mma, dị mma ma ọ na-agbanwe n'ụzọ zuru oke na ihe m chọrọ ma enwere m ike ijide gị na ọ nweghị ihe ọ bụla ma ọlị na Windows yana obere na IOS, ọ bụ karịa m chere na ọ bụ Windows Vista, Windows 7 echekwara m na 8 bụ nke na-enweghị ihere na-edepụta ọtụtụ ihe Linux (biko egbula m maka nkọwa a):
Ekwenyere m na ozi ndị gara aga yana ụfọdụ ihe dị na edemede ahụ.
Ọ bụ ọzọ distro ... onye na-achọ iji ya na onye na-adịghị ...
Enwere m ya na pc ọrụ m (ruo mgbe m nwere oge ịtinye ma wepu ya), enwere m ya n'ọtụtụ PC tupu.
Ugbu a, m na-ahọrọ fedora, sabayon ma ọ bụ arch.
Ihe dị m ka ọ bụ ihe na-ezighi ezi m bụ nsụgharị kwa ọnwa isii ọ bụla ...
Ha kwesiri ime 1 kwa afọ na mmelite iji tinye ha na-agagharị ma ọ bụ ọkara na-agagharị maka «akụkọ» na ha chọrọ ime na ịdị n'otu ga-ekwe omume na-enweghị ịtinye ụdị ọhụrụ.
Enwerem echiche ziri ezi banyere Ubuntu; Ma ọ bụ n'ihi na anyị ga-amata Canonical maka ịchọta ụzọ iji mechie ebe Linux abanyebeghị na mbụ: n'ụlọ na igwe nke ndị ọrụ nkịtị; Maka ebumnuche ahụ, ọ bụ ezie na ọ bụghị distro kachasị amasị m, echere m na ọ kwesịrị ịkwado ya.
Enwere m nkatọ m dị oke oke, dịka ọmụmaatụ maka LTS kachasị ọhụrụ, nke a na-eme na kernel 3.2, nke ọ dịkarịa ala na laptọọpụ m na-arụ ọrụ jọgburu onwe ya, nakwa na ya na ihe niile ọ rụọ ọrụ iji mee ka ọ dịkwuo mma na ọ na-eme ka nhazi ahụ dịkwuo mma. dị ka imi ihe, onye ofufe ahụ akwụsịghị mkpọtụ. Ọ dị mma, ee, ị nwere ike itinye 3.5, dịka m mere, na nke ahụ ọ kwụsịrị ikpo ọkụ, mana ka oge na-aga, Ubuntu 12.04 na-amalite ịdaba ma na-arịọ gị mgbe niile ka "wedata" site na njikwa njikwa ya. Maka m, ha kwesịrị ịrụ ọrụ na LTS karịa tupu ha wepụ ya ma chere obere oge iji nwee ike itinye kernel edozila.
Dị ka @ sieg84 na-ekwu n'ebe ahụ, enwere distros na installers na ndị njikwa ka mma maka ndị ọrụ njedebe; ihe m ga - enye ka m nwee OpenSUSE Yast2 na Fedora m hụrụ n'anya, na nke ahụ ga - abụ 98% zuru oke.
Agbanyeghị, dị nnọọ echiche.
Ubuntu bu uzo m nke Linux n’uwa. na m ji ya ogologo oge (site na 8.04 ruo 10.10, nke abụọ doro anya na ọ kachasị mma maka m). Akwụsịrị m iji ya maka ọtụtụ ebumnuche n'etiti ụfọdụ n'ime unu: achọghị m ịdị n'otu na usoro iwu ọhụrụ Canonical obere, yabụ amalitere m ile anya n'ebe ọzọ. Ọ bụ ezie na enwere m obi ụtọ ugbu a na ọgba aghara m ugbu a, enweghị m ike ịgọnahụ na Ubuntu bara m uru dị ka mmụta iji ojiji ndị ọzọ. Ihe m kwesiri ịkọwa bụ na mgbe ọ bụla enwere m obi abụọ ọ bụla, enwere m ndidi ma na-agwa m okwu ozugbo na ọgbakọ nke ọtụtụ peeji ndị a raara nye Ubuntu, nke m na-enweghị ike ikwu maka ọgba aghara ndị ọzọ. Echere m na nke ahụ bụ ihe kasị mma na ebe nchekwa m nwere nke kwuru distro na otu n'ime ihe ndị mere m họọrọ na Chakra.
Mgbe Ubuntu putara na njedebe nke 2004 (na October ka o dokwuo anya) M na-eji SUSE Linux (openSUSE adịghị adị mgbe ahụ) 9.1 PE na m hụrụ ya n'anya mana enwere m mkpa ọ dị inyocha osimiri ahụ na mgbe Ubuntu bịara apụ m kpebiri iji ya. Eziokwu ruo na nsụgharị 7.10, site n'echiche nke m Cannonical na Mr. Shuttleworth na-aga n'ihu na-aga n'ihu n'ihu. N'ezie, ejiri m ihe niile nsụgharị nke Ubuntu ruo 7.10 n'ihi na ndị na-esonụ bụ, n'echiche m, ndọghachi azụ ebe ọ bụ na ọtụtụ ihe na-arụ ọrụ na nsụgharị ndị gara aga arụghị ọrụ na 8.04 LTS. Ọ bụ mgbe ahụ ka m laghachiri na SUSE wee mepeeSUSE nke m nwere maka afọ 1 wee hapụ ya maka Mint Debian Edition wee gaa Arch Linux nke bụ nke m na-eji ugbu a.
Anyị kwesịrị ịnakwere ihe maka Mazi Shuttleworth na ọ bụ na ụlọ ọrụ ya na ọhụụ ya (na mbido ya) bụ itinye Linux na Ubuntu na tebụl na e lere ya anya dị ka ihe dị oke egwu ma nwee ntụkwasị obi na Windows na MacOS. N'ezie, Cannonical bụ azụmaahịa, mana echere m na ha enweghị ọhụụ Red Hat na Novell na SUSE Linux mgbe ha chere. Latterlọ ọrụ ndị a gosipụtara na Linux bụ ezigbo onye na-asọmpi nke ịdị arọ ma nwee ezigbo ego, nke mere na ha nwere okomoko nke ịkwado ọrụ mmeghe na nke ahụ bụ ihe ndabere nke ngwaahịa ha akwụ ụgwọ (ghọta Fedora na openSUSE).
Thezọ nke Cannonical na ọhụụ nke Mr Shuttleworth nwere ike ọ gaghị emeghe ma ọ bụ ghara ịkatọ ya, mana na-eche na ọ bụ ọchụnta ego ma na-ele ihe ndị dị ugbu a anya, echere m na ọ na-anwa ịmepụta usoro okike dị ka Apple, ya na Ubuntu na PC na gam akporo na ngwaọrụ mkpanaka, nwere ọkwa nke mwekota nke na-arụtụ aka na iOS na MacOS.
Knowsnye maara ihe ga - eme na ihe ga - abụ nsonaazụ nke a nwere ike ịnwe, mana dịka m kwuru na mpaghara ndị ọzọ nke blọọgụ a, Apple na Microsoft na-emechi gburugburu gburugburu ebe obibi ha na maka Ubuntu ka mma ma ọ bụ nke ka njọ (Cannonical n'ezie) bụ okwute na-egbusi oghere iji nwee ebe ọzọ na gburugburu ndị a.
Adịghị m onye ọrụ Ubuntu ruo afọ 5 na eziokwu bụ na Unitydị n'otu na-eme m ezigbo nnomi nke desktọọpụ MacOS (ọ bụ uto m, ọ dịghị ihe ọzọ, na-ekwu okwu ya ọzọ bụ ihe ọzọ), yana ihe eji emepụta ngwaahịa a. is the most ranked (ịghọta Mint) ha na-egosikwa na ọ bụghị ihe niile bụ mmanụ a honeyụ na flakes.
Ka anyi nwee olile anya na Mazi Shuttleworth adighi aru ya nma ma mechaa buru onye ozo ma obu ihe ojoo.
Ọ dị mma ịgụ otu azịza dịka nke gị. Maka ihe ndị ọzọ achọrọ m ịgbakwunye na n'etiti isi ihe e kwuru na mmalite nke isiokwu ahụ nke na-egosi ngosipụta ụfọdụ ihe ndị mmadụ na-ekwu banyere Ubuntu, n'eziokwu ọ bụghị ha niile bụ eziokwu ma ọ bụ ha niile bụ ụgha, mana iji mata etu ha ga-esi bụrụ eziokwu. ụzọ dị mma iji melite Ubuntu ma ọ bụrụ na ndị isi na-elekọta ya tinye ya n'ọrụ na ezi obi, mana dị ka ị na-ekwu na nkọwa gị, ọ bụrụ na ha na-asọpụrụ onwe ha na ihe ọzọ, ọ bụ ezie na n'otu oge ahụ ọtụtụ ndị ọzọ na-ekwu na nke a na-eme ugbua ebe ọ bụ na a mgbe gara aga, ọ ga-abụ eziokwu?
Agbalịrị m ọtụtụ distros. Enwere ọtụtụ ndị ọrụ dị ka m, nwere obi ụtọ na Linux mana anaghịzi adị njikere iji ọtụtụ awa dozie nsogbu. Enweghi oke zuru oke ma ọ bụ nke kacha mma maka gị. Ọtụtụ ihe banyere Ubuntu anaghị amasị m, ọkachasị ọpụpụ ya na Gnome na obi ụtọ Unity Unity .. mana ọ bụ nke kacha dịrị m mma na enyebeghị m nnukwu nsogbu. Dịka ọmụmaatụ, Achọrọ m iji Fedora mgbe Unity mechara pụta na ọ bụ otu nsogbu mgbe ọzọ…. ma aghọtaghị m aha ọma nke nkesa. Ọ bụ eziokwu na etinyeghị m oge karịa na ya. Mana nke ahụ bụ ihe Ubuntu na-azọpụta m: wụnye ma jiri. N’oge na-adịghị anya, m ga-eji Ubuntu Gnome Shell Remix mee ihe n’ọdịnihu na distro nke Gnome tọhapụrụ. Maka echiche m Gnome na-arụ nnukwu ọrụ, jiri nwayọ nwayọ ma na-enweta njirimara dabere na ịdị mfe na ịdị mfe ma na-ewebata oge a. Ọ bụrụ na ị nweta isi dị ka Ubuntu / Debian ma ọ bụ dabere na Ubuntu, na-agbazi njehie gị…. maka ezigbo m. More nkesa ọdịnala dị ka Arch Enweghị m obi abụọ na ike ya…. Mana dịka m kwuru, ọ dịla anya ihe mere. Ubuntu nwere aha ọma maka imebi…. ma enwebeghị m nnukwu ọdachi nke mere na achọghị m ịma ihe ha na-ekwu. Ọ dị oke njọ banyere ịdị n'otu nke na-atụgharị gaa hodgepodge a na-apụghị ịghọta aghọta.
Ekwenyeghị m na edemede gị. M na-eji xubuntu 12.04 (n'etiti ndị ọzọ distros) na ọ bụ ihe kasị mma m gbalịrị na ọ bụ LTS.
Ntuziaka 1. - Ugboro ole na-erite uru na ọrụ Ubuntu? Nza
ebe 2.- Ọtụtụ distros na-eme otu ihe ahụ, nchịkọta ahụ na-arụ ọrụ na distro ha.
Point 3.- Enwere ụlọ ọrụ n’azụ ya, mana akwụghị m ụgwọ ọ bụla. Echere m na ọtụtụ ndị mmepe na-achọ nke ahụ. Achọrọ m obodo, mana ọbụlagodi ubuntu akwụsịghị ọrụ ahụ na mberede.
ebe 4. - Ọ naghị eburu n'uche echiche nke ndị ọrụ, akpọrọ m asị Unity mana ọ naghị etinye ihe ọ bụla, ebe ị nwere ike ịhọrọ desktọọpụ ọzọ. Chakra gbahapụrụ 32 ibe n'ibe bụ wetara? N'ezie nke a bụ oge a.
Point 5.-ejighi n'aka?, Ma eleghị anya ee, mana site na ndepụta ị nyere, ọtụtụ distros kụrụ m mgbe m na-emelite, nke ugbu a Ubuntu emeghị ya (njehie na nchịkọta ee, mana usoro eserese n'oge ahụ) .
ebe 6.- Olee ọtụtụ distros bụ mbipụta nke ubuntu?, Ọtụtụ, gụnyere Mint, nke na-enyeghị m ihe ọ bụla.
isi nke 7,. Winbuntu. ekele nke a ọtụtụ amalitela na Linux ụwa.
N'oge ahụ Ubuntu m enyebeghị m nnukwu nsogbu, na ọtụtụ n'ime ndị ị kwuru nyere m.
Na-ekwenye n'echiche nke onye edemede ahụ na-ekwenyeghị, ọ bụghị isiokwu niile.
morpheus ị bụ eziokwu ma eleghị anya, m kwupụtara onwe m ihe ọjọọ. Ekwenyere m na echiche nke onye edemede nke isiokwu ahụ na nkwenye niile na ihe nzuzu nke ekwuru banyere Ubuntu.
Otú ọ dị, ụfọdụ n'ime nkọwa ndị ị ka nyere isi ihe ndị ahụ dị ka ajụjụ dị ka isi ihe ị na-akatọ, na ị na-emezigharị ọrụ nke otu distro na-adabere na nke ọzọ dịka ndị na-emeghị Ubuntu maka ọtụtụ ihe kpatara ya.
Enweghị aha, nkọwa m na-enye bụ echiche m na ya mere a na-enyo enyo, dị ka echiche ọ bụla ọzọ.
Anaghị m eme ka ọrụ Mint ghara iru ya, na ntụle, ana m akwanyere ọrụ niile a na-arụ na Linux anya, ana m etinye ya dị ka ihe atụ na ọ bụrụ na itinye onwe gị na atụmatụ ọjọọ, enweghị onye zuru oke ma ị nwere ike ịchọta ihe kpatara ya ị chọrọ.
Platonov, isi okwu abụghị ka ọ bụrụ ihe ọjọọ kama ime ihe n'eziokwu. Ọtụtụ ihe ekwuru banyere Ubuntu na net bụ ụgha mana ndị ọzọ abụghị. Mgbe ihe na-ewu ewu, ọtụtụ akụkọ na-apụta, kamakwa ụfọdụ ihe, na ọrụ ndị chọrọ ka Ubuntu nye ya ọgwụgwọ ziri ezi bụ ime ka ihe doo anya, ọ bụghị itinye onwe ha n'otu atụmatụ ọjọọ ahụ, na-eme ka ndị ọzọ ghara iru eru n'otu ọnọdụ ahụ. Dị ka ndị na-akatọ ya n'ụzọ na-emebi ihe.
Gụọ isiokwu zuru ezu.
Enwere m ike ịghọta na ị nweghị mmasị na Ubuntu, enwere m ike ịghọta na ị nweghị echiche ya, mana na ị na-agha ụgha dị ka onye na-achị ọchị ka anyị wee nwee ike ikwughachi nkwenye gị na-eme ka m daa ọrịa.
Ubuntu na-erite uru na ọrụ ndị otu Debian mepụtara na anaghị akwụghachi mbọ ahụ. Gha ụgha na-ada ụda gị?
Ubuntu na-agbakwunye ngwungwu ndị akwadoro naanị na distro a ma ọ bụghị na nne na nna distro (Debian).
Ubuntu nwere ulo oru na nwoke (Shuttleworth) nke choro irite uru nke mbu. Gha, amaghị m onye ọ bụla kwụrụ ụgwọ maka iji UBUNTU, Ọ B UNR UN na ha ga-enweta ya na ya na nke ahụ, ha ga-akwụ ụgwọ maka ọrụ ọrụ aka, ọ bụghị maka ngwanrọ ahụ.
Ubuntu enweghi uche nke ndi oru ya ma tinye ngbanwe ya dika obu Windows ma obu OS X. Lgha, O dighi onye na-eme ihe obula, Ọ B IFR YOU na YOUB UNGH UN IBITYRITY ITYB YOUR YOU YOU B YOU XUBUNTU, LUBUNTU, KUBUNTU NA UGBU A
Iji kwuo na distro na-amanye gị ka ị jiri ihe na-abịa tupu arụnyere bụ IEgha, ị nwere ike iwunye ma wepu ihe ọ bụla i chere na ọ dị mma, ị nwedịrị ike ime ka distro ahụ tụọ gị site na nbudata naanị ubuntu-ntakiri
Ubuntu ejighi eguzosi ike, ha na-eche naanị maka ịmalite ya ESTLỌ NILE, SABAYON, FEDORA, OPEN SUSE, CHAKRA ọ dịghị onye n'ime ha yiri ka ọ kwụsiri ike na m ma ha niile yiri ka ha agaghị aba uru.
Ubuntu mbipụta OS X. LIE Kedụ ka Unitydị n'Otu si yie osx?
Ubuntu = Winbuntu N'ikpeazụ ...
Nyochaa, ịkatọ, ịtụ aro ... ihe ndị a niile kwesịrị ịba mma ma dịkwa mkpa.Ma ịgha ụgha ma ọ bụ ikwu okwu n’enweghị ihe ọmụma iji nwaa ime ka ndị ọzọ kwenye n’echiche gị bụ ihe na-adọkpụ n’uche m.
Anọ m na-eji Linux kemgbe 2000 na Ubuntu bụ ihe ọtụtụ n'ime anyị rịọrọ n'oge ahụ, ihe ọ bụla Debian dị ka ọ ga-adị na ọ dịghị mgbe ọ bụla, a naghị eji Linux arụ ọrụ na desktọọpụ na Ubuntu nwere ọtụtụ ihe ime nke ahụ. .
Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na anyị gụọ isiokwu ahụ dum tupu anyị enye echiche anyị (Echere m, n'ihi na echiche gị abụghị ihe megidere nke onye edemede ... na n'ihi «Rastrero»).
Gụọ isiokwu zuru ezu
Maka Chukwu, biko gụkwuo ederede nke ọma, ma zuru ezu na ị gaara echekwa bile gị.
kpam kpam na-ekwenyere gị platonov
Nkwado tupu ịdebe echiche aka nri na aka ekpe: G REỌ ISIOKWU zuru ezu !!!
Echere m na m na-emeghe echiche nke ndị ọzọ banyere Ubuntu (ma e wezụga n'ihe banyere ndị na-anụ ọkụ n'obi na-agba ume nke distros, ọbụlagodi nke Debian n'onwe ha), na-agbakwunye ihe ọhụụ na-ekwu n'isiokwu ya:
Ọ bụ eziokwu, na nke Ubuntu, ọ chọghị ịnyeghachi ọrụ ya, opekata mpe, na Debian, nke bụ ebe ha na-adabere na LTS ọ bụla (ọkachasị) iji mee ka distro ha, ihe ọjọọ nye Ubuntu ... mana maka ọzọ N'aka nke ọzọ, anyị maara n'ụzọ zuru oke mmechi ahụ dị na Debian, ha lekwasịrị anya karịa na ha tupu ịnakwere ọrụ ọhụụ, ọ dị njọ maka Debian.
Ekwuru na Ubuntu anaghị ege ndị ọrụ ntị, mana enwere ike ikwu otu ihe ahụ banyere Debian, na Fedora otu ihe ahụ (distro nke m ga-agagharị), n'otu aka Ubuntu na-apụta na mgbanwe dị egwu dịka Unity, nke bụ nke Kacha ewu ewu, n'aka nke ọzọ, enwere ndị ọrụ na-anaghị amasị mmegharị ahụ achọrọ na ngwungwu Debian na-ata ahụhụ, ókèala ahụ na paranoia ma mee ka ọtụtụ nchịkọta kwụsịlata maka ịgafe nyocha ugboro ugboro (naanị kernel, ugbua M nwalere stably na-enweghị nsogbu na 3.6.1, na na Debian ha ka na-adịghị eru 3.3, ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji wụnye 3.5 ọ ga-abụ si ibuo repositories); Fedora ekpeela ekpere ka ndị obodo kpee ekpere na ha enweghị ụdịdị ahụ, ma ọ bụ opekata mpe na oge nkwado ahụ karịrị ọnwa iri na atọ.
Iguzosi ike nke Ubuntu, ihe ọjọọ nke Ubuntu distros ka ejiri dịka "ikpeazụ", ha anaghị akọwa na ha bụ maka Ubuntu ihe ụdị nnwale ahụ bụ maka debian, nke siri ike bụ LTS.
Gịnị ma ọ bụrụ na enweghị m mmasị na Ubuntu ma ụbọchị ndị a, ha na-eme ka m pụọ na ya ọzọ na otu ugboro na ihe niile na-asị Gnome Classic wee banye n'ụzọ zuru ezu na Gnome Shell, bụ na ha na-ebute ọrụ maka "ụdị ugbu a", nke ahụ bụ , ugbu a na 12.10 na-apụta, ha lekwasịrị anya na idozi njehie ndị na-ebilite, ebe n'aka nke ọzọ, launpad ahụ na-ejupụta na ndị mmadụ na-agbakọ iji nwee nsogbu na mmemme eji na LTS 12.04 edozi… .. Ha abụghị kwesiri ibute uzo ahu karie nke anwale?
Ọfọn, Ubuntu bụ nhọrọ dị oke mma, ọ bụghị nke kachasị mma ma ọ bụ nke kachasị njọ, onye ọ bụla na-anabatakarị onwe ya ebe ọ kachasị mma, maka ugbu a achọghị m ichere maka njehie na mmemme LTS iji dozie, ma ọ bụ jiri Betas ... ọ dịkarịa ala ka ị kwụsị ịnọ ruo mgbe ụdị ule ikpeazụ ga-apụta, dị ka 12.10,13.04,13.10,14.04 na 14.10, maka ihe m chọrọ (nke na-abụghị ihe ndị ọzọ chọrọ) m ga-aga na aha nnabata, ma ọ bụ ọzọ version nke na-enye mkpa ka ya ike version na ọ dịghị ihe na-erughị ule version.
Enwetara m ngwugwu, LTS prox ga-abụ 14.04, 3 gara aga bụ ule.
Biko ndị mmadụ gụọ isiokwu a ọtụtụ oge ... ihe ndị ahụ “m tụrụ” anaghị ekwu maka uche onye ode akwụkwọ kama ọ bụ echiche ọ gụrụ ma kwupụta echiche nke aka ya na-agbagha ha. Ekwesịrị m ịgụ ya ugboro abụọ iji kwenye n'ụzọ zuru ezu (ụnyaahụ m were iwe: P)… Canonical bụ ụlọ ọrụ na-ehota mgbasa RedHat na 2003 "ọ bụghị ọrụ ebere ọha na eze". N'ihi ahia gị ọtụtụ n'ime anyị na-eji Linux taa, ọ ga-adị mma ịnweta ntakịrị ekele maka distro a. Ebumnuche nke Ubuntu bụ iru onye ọrụ novice na azụmaahịa, ọ bụghị ka ọ bụrụ egwuregwu ụmụaka. Na n'elu nke ahụ, ọ na-eme ya n'efu, ị maara ugboro ole ọ na-echetara RedHat na ọ rụzuru ụlọ ọrụ ahụ 10 afọ gara aga ma bụrụ onye akwụ ụgwọ (yana ole ndị ọrụ hapụrụ ma ọ bụ gaa debian ma ọ bụ fedora isi). Enwere m olileanya na Canonical anaghị eso ụzọ ahụ, ebe ahụ ma ọ bụrụ na ị ga-ahụ uru nke ọgba aghara a. O meela tupu.
Ọ bụ ihe na-akpali mmasị etu ụdị post a si adọrọ mmasị ndị mmadụ mgbe niile. Ọ bụ ezie na ndị ọzọ anaghị ekwu okwu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mmadụ eche maka gnome2 vs nwunye ma ọ bụ shea ọhụrụ, otu! nnukwu okwu. O nwere ike ịbụ n'ihi na anyị nwere mmasị ma ọ bụ ka ọ metụtara ndị ọrụ Linux kwa ụbọchị? Ka o sina dị, n’echiche m akpan akpan, anyị nọ ugbu a n’obodo ebe ihe nile ga-adị ngwa ngwa ma n’enweghị oge ịkwụsị itule ihe; ghọta uru na ọghọm. Onwe m, amalitere m na Linux ọ bụghị n'ihi na achọrọ m ịnweta ihe ọhụụ ma ọ bụ n'ihi ike gwụrụ m na windo; nanị n'ihi na ọrụ m chọrọ ya. M na-echeta mgbe m malitere na Linux mbụ m distro bụ emepeuse 10.2, m na-ama hụrụ na Ubuntu dị mma maka novice ọrụ. Agbanyeghị, n'ime ọgba aghara niile nke naanị enweghị nsogbu mgbe ị na-etinye ma ọ bụ n'oge echichi na laptọọpụ m ka a na-emeghe 10.2, emesịa mgbe m gbanwere laptọọpụ m gara debian, gaa ubuntu ruo mgbe m pụtara ịdị n'otu, agara m LMDE, ọnụọgụ mmelite dị na traumatized site na mmelite mmelite ọ bụla m mechara Kubuntu 12.04. N'otu aka ahụ, etinyego m Ubuntu maka ọtụtụ ndị ọrụ ibe gị, dịka nke a si dị n'ihi na ọ dị mfe iji, obere nsogbu na nje virus, ma emesịa hapụ ya, naanị n'ihi na ejighị ya na sistemụ ahụ ma ha enweghị oge itinye ego na ịmụ banyere ya. Yabụ, ọ bụrụ na Ubuntu ma ọ bụ distro ọzọ dị mma ma ọ bụ dị njọ, ọ bụrụ na ọ na-atụnye ụtụ ma ọ bụ na ọ bụghị na ihe kpatara ya, azịza (m maara) ga-adabere n'ụdị ma ọ bụ mkpa nke onye ọrụ njedebe. N'ikpeazụ, m kwadoro onye edemede nke post.
Naanị m enweghị mmasị na ya, ebe ọ bụ na nsụgharị 11.04 ọ dịtụbeghị nke ọma maka m na ihe na-emezughị m mgbe niile ma ghara ịkọ banyere arụmọrụ dara ogbenye nke na-enye m, naanị ihe echekwara bụ kubuntu.
Ummm, nke ọma, ebe enwere ikike na ike mgbe niile nwere nnukwu njikọ aka, ọ nweghị ihe agaghị ekwe omume na azụmaahịa kọmputa.
PS: Onwe m achọghị ubuntu ma ọlị, ọ bụ ezie na kọntaktị mbụ m na Linux bụ na ubuntu mbipute 8.04
Ubuntu (ụfọdụ) achọghị ya n'ihi na ọ bụ ewu ewu. Ma ọ bụrụ na ọ dị, mkpebi ha na-ebuwanye ibu n'ihi na ha nwere ike ịpụta mgbanwe na ndị ọzọ. Ha ezighi ezi? N'ezie, dika anyi nile n'eme. Afọ ole na ole gara aga iji ubuntu dị mma. Dị ka ọ dị ugbu a ọ nwere ike iji ihe niile pichiblás, ihe a bụ ịsị na m gafere ma gbaa ọsọ. M na-eji ubuntu, m na-eji debian, eji m yause, ndị ọzọ Agbalịrị m ime omume ọma, a hụkwara m ha niile n'anya. M mgbe niile jisiri ike "mee" m igwe nke ọ bụla, nke bụ ihe m chọrọ.
M na-echekwa na ndị ọrụ obodo nwere mgbagwoju anya na obodo nke ndị mmepe na ọ bụ ya mere enwere nsogbu. Ndị ọrụ nwere nnukwu ikike ịhọrọ ihe ọzọ, a na-anụkwa ya na ọgbakọ.
Ekele na isiokwu ahụ. A na-egosipụta ihe niile n'ụzọ ziri ezi na m kwenyere n'echiche nke onye edemede. Ọ bụ ezie na enweghị m ike iguzogide itinye nke m.
Agbalịrị m Ubuntu dị ka distro mbụ m mgbe akpọpụtara m na GNU / Linux (m si na Window $), ma ugbu a, na m gbalịrị gburugburu 8 distros, ịdị n'otu dị m ka desktọọpụ mara mma ma ọ dịkarịa ala masịrị m, ihe ọjọọ bụ Dash n'aka ekpe, Enweghị m mmasị na ya, ana m etinye desktọọpụ m otu a: elu panel na ịgbada n'ọdụ ụgbọ mmiri, nke ahụ (na mgbe ụfọdụ a Conky)
N'ezie Ubuntu abughi nani desktọọpụ, ma ọ bụrụ na ịchọọghị ya, ị nwere ụzọ ndị a:
Ubuntu 10.04 (jiri njedebe nke nkwado na Eprel nke afọ na-esote)
Kubuntu (ọ bụ ezie na enweghị m mmasị na KDE)
Xubuntu (ugbu a ana m ebudata ya)
Lubuntu (featherweight onye mmeri)
Ana m alaghachi Ubuntu (dị ka Xubuntu) n'ihi nsogbu m dị iche iche na Debian, ọ bụghị ihe ọjọọ distro, ma ụfọdụ nchịkọta na-efu na Mmanya (M na-egwuri egwu) anaghị arụ ọrụ ma ọlị.
Ma hey, n'ihi na agba na-amasị.
Isiokwu ahụ dị ezigbo mma, m gụrụ ya kpamkpam na m na-ekerịta echiche nke isiokwu ahụ, abụghị m ọkà mmụta sayensị kọmputa ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri nke ahụ mana enwere m mmasị n'ịgụ ma na-anwa mgbe niile ịmụ obere ihe niile, amalitere m na ụwa Linux na U-10.04 lts site na ncha na m mebiri ụbụrụ m na mbụ na-achọ otú m ga-esi jikọọ mobile m iji nwee ike iji ịntanetị ma ọ bụ ihe na-enye obi ụtọ iji nweta ya, ma eleghị anya ihe na-enweghị isi maka gị mana maka m nke na-esote, ọzọ na-agwụ na ọ bụ ihe super na mgbe ahụ m raara onwe m ịmụ ọkara iji ọnụ na mụtara ihe ndị bụ isi. eziokwu bụ na ubuntu bụ mbata m na ụwa Linux ma enwere m obi anụrị na m kpebiri ịnwale ihe dị iche na ihe ndị mmadụ na-eme.
Agbalịrị m iji slax Anaghị m echeta ụdị ọ bụla mana ọ bụ n'afọ gara aga echere m na ọ bụ 6 mana m hapụrụ n'ihi na enweghị m ike ijikọ mọdem mkpanaka m wee laghachi na Ubuntu na 10.04, mana m chọrọ ịnwale debian na m ebudatara iso nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 500mb ma ọ bụ m arụnyere na enweghị gburugburu ma ọ bụ ihe ọ bụla mmadụ na twitter gwara m na m họọrọ na-ezighị ezi nbudata na mgbe ahụ otu ihe ahụ mere m na arch ya mere m kwụsịrị ị jụ egwuregwu ma budata ubuntu 11.10 ruo ụbọchị ole na ole gara aga, ekpebiri m iji kubuntu maka KDE ahụmịhe m na ubuntu adịla mma kemgbe m bụ onye ọrụ maka web, nkata, egwu na ihe ndị dị ka ma enwere m ihe niile m chọrọ. Mana enwere m mmasi, enwere ọtụtụ mgbagha na m chọrọ ịnwale mana amaghị m ma m nwere ike ijikọ m mod mod brand BAM na ha niile ma m na-egwu ya mgbe niile.
Anaghị m arụrịta ụka na ọ bụrụ na ubunto ka mma ma ọ bụ ka njọ karịa ka m siri mara nke bụ, eziokwu bụ na enweghị m mmasị n'ihe m chọrọ bụ ịmụ ma nwee ahụ iru ala na Ubuntu ma ọ bụ nkesa ọzọ ebe ọ bụ na n'ikpeazụ m ga-anọgide na-adị akụkụ nke obodo GNU onye ọrụ / LINUX na nke ahụ bụ ihe dị mkpa. Ekele m na m na-agụ ha mgbe niile, ọ dị ka ọmarịcha blog.
Amalitere m Linux na Ubuntu, n'ụdị nke 7.10 bụrụ nke ziri ezi na m ga-ekwupụta na ka m matara Linux m na-ahapụ distro a nke nta nke nta (ịhapụ ya kpamkpam na 10), maka ndị ọzọ nwere nkwụsi ike na nke ahụ ga-arapara karịa na mkpa m (arụmọrụ karịa ihe niile).
Ọ bụ ezie na ọ dị ezigbo mkpa iji mesie ike na o doro anya na onye ọ bụla n’ime anyị nwere mmasị na mkpa dị iche iche na dịka Elav si ekwu; enwere ike ịchọta ihe niile akpọrọ ebe a n'ọtụtụ ebe ndị ọzọ na ọbụna kwuo n'ụzọ adịghị mma. Yabụ na eziokwu bụ ụzọ nkwanye ugwu maka m yana isi ike na-adịghị akparị onye ọ bụla.
Ọtụtụ mmadụ kpọrọ ya asị n'ihi na ọ bịara mata nke ọma na ọ bụghị n'okpuruala dị ka ọ dị na mbụ
Arụmụka ahụ na ọ bụrụ otu a ma detuo ya, yana ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ dị m nzuzu. Nke ahụ dị ka a ga - asị na ụlọ ọrụ na - eji ọgbatumtum ọhụrụ enwe ọgbatumtum nwere ntụsara ahụ n'ihi na ụlọ ọrụ ọzọ enweghị ike ịkwalite ngwaahịa ya n'akụkụ ahụ? O doro anya na ọ ga-eme ihe dị iche iche mana nke ahụ na nke ahụ anyị meriri ndị ọrụ xD ma anyị eme mkpesa ??? Ọ bụrụ na ha "detuo" ihe ndị na - enyere ndị ọrụ aka, ebee ka nsogbu ahụ dị? More fanboyism karịa ihe ọ bụla ọzọ m chere
N'ụwa nke nnwere onwe a, onye ọ bụla nwere ike iji ihe ha chọrọ, n'ọnọdụ m, m na-ahọrọ tebụl pere mpe mana ọ bụghị ya mere m ga-eji katọọ gburugburu ebe ndị ọzọ. Ihe ekwesiri iburu n'uche bu echiche nke obodo ma o doro anya na Unity na Gnome 3 adighi anabata nke oma.
Zaghachi Fernando Monroy
Echere m na Ubuntu bụ oke nkesa, ọ na-eme ka ihe dị mfe na ndị ọzọ nwere ike isiri gị ike, maka ndị na-enweghị oge, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta sistemụ kachasị mma ... ọ na-enye gị ohere ịnwe ngwanrọ emelitere dị mfe ma na elu nke ahụ, ihe a niile dị mfe Ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nwere nnukwu obodo n'azụ gị, olee ihe ọzọ ị nwere ike ịrịọ maka ịbanye na Linux? Mgbe ahụ onye ọ bụla na-ahapụ ma ọ bụ nọrọ ma ọ bụ na-emeziwanye, dịka ọmụmaatụ m na-etinye kernel 3.6 na Ubuntu ọ bụla ma hụ usoro m ka ọ na-efe, na ụzọ dị mfe na-, kama na ndị ọzọ m ga-achịkọta ya otú tedious ọ bụ na ya na-aga n'ihu ọdịda maka adịghị eme ya n'ụzọ ziri ezi ma ọlị ... wdg.
Obi abụọ adịghị ya na Ubuntu abụghị nke kachasị mma maka otu, mana echere m na n'ozuzu ya, ọ na-ekpuchi ọtụtụ ihe ndị ọrụ nwere ọkwa dị elu chọrọ na ụbọchị anyị taa, nkasi obi, arụmọrụ, ọsọ, na ọtụtụ ozi. ọ bụrụ na ị chọrọ imikpu
Kedu ihe dị njọ na uru? Ka anyị ghara mgbagwoju anya free software na free software n'ihi na ha abụọ kpamkpam dị iche iche ihe.
Ọ nwere ike ọ nweghị onye ga-eji ya ma ọ ga-apụ n'anya, onye ọ bụla nọ na Windows n'oge ụfọdụ, wee gaa Ubuntu, ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ ịkọwa Linux OS kpamkpam, ụzọ kachasị mma bụ mebie distros nke na-eme mgbanwe site na Win ruo Linux dị mfe, ma n'ụwa a enwere ọtụtụ "smartass"
Tupu Ubuntu, Linux enweelarị ohere dị ukwuu n'ọgụ maka sava, enwere nkesa dịka Fedora, Debian, Slackware, Gentoo, Arch, Mandrake na SUSE, na e nwere ọtụtụ nkesa dị mfe maka onye ọrụ n'oge ọmụmụ Ubuntu dị ka ọ bụ Lindows, Xandros ma ọ bụ Knoppix (nke ikpeazụ ka dị, mana echefuru ya).
Worldwa nke Linux karịrị Ubuntu, mana ọtụtụ ihe karịa, ikekwe ọ bụ naanị ya bụ otu n'ime ndị ọrụ kachasị, mana ọ dị anya na-anọchi anya akụkụ dị oke mkpa nke ndị ọrụ Linux niile (ejiri m n'aka na ọ naghịdị na 20% penetration, ọbụna gụnyere ya nkwekọrịta dị ka Mint nke na-ewu ewu).
Ekwenyeghi ahia! 😉
Otu ndudue ndị ndị mere nkesa maka ịdị mfe na enyi na-eme ụfọdụ ndị 'smart' ọrụ nke nkesa ndị ahụ dị mfe mgbe ha na-eweda ndị ọzọ kwere na ha bụ etiti ụwa. Wa na, dị ka akọwara gị, dị adị ma na-eto eto kemgbe Ubuntu pụtara.
Nsogbu nke Ubuntu abụghị na ọ na-eme ka ọ dị mfe, mana ọtụtụ ihe ndị ọzọ a na-ebu n'ụzọ, omume ọ na-ewe maka obodo na ngwaahịa ikpeazụ nke malitere na ụbọchị ọ bụla kwa ọnwa isii na-eme ka ọ pụta ọkara mechaa ma bụrụ ihe mgbu dị ka eze mgbu ọtụtụ ugboro. Agaghị eju m anya ma ọ bụrụ na, ekele maka Ubuntu, ọtụtụ mmadụ enwetala onyinyo ọjọọ nke GNU / Linux karịa ndị nwetara ezigbo onyonyo.
Ekwenyere m n'ụzọ zuru ezu n'echiche gị gbasara Ubuntu. Amalitere m na Linux ụwa na Ubuntu wee si ebe ahụ gaa n'ihu ịnwale nkesa ndị ọzọ .deb na .rpm. Na njedebe m nọrọ na Debian nke m nwere ezigbo ntụsara ahụ. Ugbu a, agbanweela m na Centos 6.3 maka nkwụsi ike ya, nkwado zuru oke ruo 2017 na nkwado ndozi ruo 2020, Gnome 2 na 100% RHEL kwadoro. Eziokwu ahụ emeela ka m kwenye ọ bụghị naanị na sava m, m na-eji ya na desktọọpụ na laptọọpụ m na enweghị nsogbu ọ bụla na ndị ọkwọ ụgbọ ala.
Hụ nhazi nhazi m ma ana m akwado ya:
Daalụ .. na-akpali gị isiokwu 🙂
Eziokwu bụ na nke a bụ otu n'ime ederede ole na ole ebe ndị mmadụ na-ekwu okwu n'eziokwu, na-ekwenye kpamkpam na nke ọ bụla n'ime isi ihe a tụlere.
Daalụ Diego ..
Amaghi m ihe kpatara na achoghi m disstro a, dika m achoghi ya ma oli, o gha abu n'ihi na mgbe m tinyere ya (ubuntu, kubuntu), o nyere m echiche ojoo. n'ihi nwayọ nwayọ ya na n'ihi desktọọpụ ahụ jọgburu onwe ya nke 3 desktọọpụ, yana ma eleghị anya n'ihi na echere m nke ọma na ọ kwesịghị ịbụ ndị kachasị ewu ewu, emepeuse na mandriva hapụrụ m ezigbo ihe ijuanya, ha dị oke nkesa ma dịkwa mfe iji, ana m atụ aro openssuse 100 %, e nwere m arụnyere niile mmemme m chọrọ, na ezi mfe.
na-emeghe suse arụnyere mara mma ngwa ngwa na ya ndụ cd zuru okè, a distr. Ọ na-ebu ngwa ngwa ma mechie ngwa ngwa, ana m atụ anya ịkwado ya ma kwalite ọhaneze ya.